Nahavita teo amin’ny zavakanto i OL : miraradraraka ny fanomezam-boninahitra | NewsMada
Nahavita teo amin’ny zavakanto i OL : miraradraraka ny fanomezam-boninahitra
Mpanakanto mpihira, mpitendry, mpanao teatra, mpanoratra, mpandihy, teknisianina feo sy sary, sns. Maro ireo nahita tombontsoa tamin’i Eckehart Olszowski, tale jeneralin’ny CGM. Mendrika ho azy ny fanomezam-boninahitra.
Notaterina teto omaly, fa nodimandry ny alahady teo i Eckehart Olszowski, fantatry ny maro amin’ny hoe Ol. Nitana ny andraikitra maha tale jeneralin’ny CGM nandritra ny taona maro, kanefa nahavita be ho an’ny tontolon’ny zavakanto, indrindra ny mozika teto Madagasikara koa izy. Rariny raha toa ka niraradraraka ny fanomezam-boninahitra sy ny tsiaro ny zava-bita nataony, avy amin’ireo mpanakanto nahita soa taminy.
« Izy no nahitako voalohany izany an-dafy izany », hoy i Tselonina. “Nanampy ahy teo amin’ny lafiny maro, raha tsy hiteny afa-tsy ny fanatontosana ny festival Angaredona hatramin’izay”, hoy kosa Rajery. “Nanana anjara toerana lehibe teo amin’ny fampiroboroboana ny zavakanto malagasy teto ka hatrany ivelany izy nanomboka ny taona 1980. Nanokatra ny lalan’ny mpanakanto nankany Allemagne, ka anisan’ireny ry Rossy, Tselonina, Vahombey, Ricky, D’Gary, sns”, hoy kosa ny fitadidian-dRalaindimby Tsilavina.
“Ny faniriany dia ny hisondrontan’ireo te handroso amin’ny asa. Betsaka ny fianarana nataon’ny tena teto sy tany ivelany, ary i Ol avokoa no nahitana izany”, hoy kosa ny fitantaran-dRamim’s, anisan’ireo teknisianina nitana andraikitra naharitra tao amin’ny CGM.
Tsy ny mpihira sy ny teknisianina ihany no natosik’i Ol. Ao koa ireo mpanao teatra sy ireo mpisehatra amin’ny literatiora, toa ny Faribolana Sandratra.
Marihina fa andrasana etsy amin’ny CGM Analakely ny nofo mangatsiakan’i Ol, hatramin’ny omaly. Mbola hisy ny fandaminana hatao, amin’ny fanomezam-boninahitra ifandimbiasan’ny mpanakanto, mialoha ny handevenana azy eny Ambohimalaza, ny zoma ho avy izao.